ကရင်ပြည်နယ်ကသိပ်လှတယ်လို့… ကိုယ်ပြောရင်…. မင်းယုံလိုက်ပါ……… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Local Guides » ကရင်ပြည်နယ်ကသိပ်လှတယ်လို့… ကိုယ်ပြောရင်…. မင်းယုံလိုက်ပါ………	4
Posted by သျှားသက်မာန် on Oct 13, 2016 in Local Guides, Travel |4comments
လည်းရှိပါတယ်.ရေတွေဆိုတာကျောက်စိမ်းရောင်အတိုင်း.. သဘာဝအလျောက်စိမ်းနေပါတယ်…ရေတံခွန်ကလည်းတစ်နေရာထဲကကျနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ.အဖက်ဖက်ကကျနေပြီးရေအောက်မှာလည်းရေများကကြည်တောက်နေပြီးမွန်လေးဆိုတာရေတံခွန်ကိုမြင်တာနဲ့ မနေနိုင်တော့ပါ…အတင်းပဲဆင်းပါတော့တယ်။ သတိတော့ထားဆင်းရတာပေါ့နော်…ကျောက်ဆောင်တွေကဟိုနေရာ..ကျိုးတိုးကျဲတဲ.. ဒီနေရာ..ကျိုးတိုးကျဲတဲနဲ့ …ချော်လဲရင်..အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့.. သွားတွေအကုန်ကျွတ်ထွက်သွားမှာပါ ။ရေသိပ်မကူးတတ်တဲ့ သူတွေအတွက်လည်းဘောငှားလို့ရသလို…ရေကူးတတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း.. နက်တဲ့ဘက်ရောက်မသွားအောင်ကြိုးတွေနဲ့ တားထားသေးလို့ …အန္တရာယ်ဆိုတာ. .ပြောစရာတောင်မရှိပါ။ပြီးတော့.ကြိုးကိုကိုင်ပြီး
၁၁နာရီထိုးသွားတော့တိုးလီဒါလေးကအပေါ်တက်ဖို့ ပြန်ခေါ်တော့.. မွန်လေးတို့ လည်းပြန်တက်လာကြပြီးအ၀တ်အစားထုပ်တွေထားခဲ့ရာ စားသောက်ဆိုင်ကိုပြန်လာပြီးရေပြန်ချိုး၊အ၀တ်အစားအသစ်တွေလဲ၊နောက်ခရီးဆက်ဖို့ လှလှလေးတွေပြင်
တယ်။ကျောက်ကလပ်ကိုသွားဖို့ တံတားလေးကိုဖြတ်ကျော်ရပါသေးတယ်.. တံတားကို၇မိနစ်လောက်လျှောက်ပြီးမှကျောက်ကလပ်စီရောက်ပါတယ်. .တောင်ခြေရောက်တော့အမောကိုပြေသွားတာပါပဲ။..တောင်တွေဝန်းရံနေတဲ့ကျောက်ကလပ်စေတီ
ကျောက်ကလပ်တောင်ပေါ်ကိုလူကြီးတွေကတော့သိပ်မတက်တော့ဘဲ.. တ၀က်လောက်မှာကျန်နေခဲ့ပြီးအမောဖြေကျန်ခဲ့ပါတယ်။ မွန်လေးတို့ လူငယ်တွေကတော့ဟိုးတောင်ထိပ်ထိရအောင်ကိုတက်ကြတာ. .တောင်ပေါ်ကနေအောက်ကိုပြန်ကြည့်
ကျောက်ကလပ်မှာပူလာသမျှ ကော့ဂွန်းဂူရောက်မှပဲ. .အေးချမ်းသွားပါတယ်.. ဂူရဲ့ အတွင်းအပြင်နံရံပေါင်းများစွာကိုနေရာအ
လွတ်မချန်ဘဲဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်တွေတည်ထားတာမှ တကယ့်ကိုကြည်ညိုစရာနဲ့ အကြံကောင်းပါပဲ။ ဂူအတွင်းပိုင်းကပိုလို့
ဘုရင်ညီဂူကိုငယ်ငယ်လေးတည်းကရောက်ဖူးပါတယ်.. သာမညသွားရင်ဝင်နေကြမို့ ပါ..အရမ်းရေချိုး၊ရေစိမ်လို့ကောင်းပါ
တယ်။ခုတော့မရောက်တာအတော်ကြာတော့.. အ၀င်ဝလမ်းလေးတောင်အပင်တွေအုံ့ ဆိုင်းလို့ သာယာနေပါပြီ။ရေလည်း
ငယ်ငယ်တုန်းကလိုစိမ်.. ဒါပေမဲ့ဘုရားအရင်သွားဖူးမယ်ဆိုပြီးတောင်ပေါ်တက်ပါတယ်. .လှေကားထစ်တွေကိုမနည်းကုန်း
တက်၊မောတော့ရေသောက်နဲ့ သိပ်မကြာပါဘူး10ဆိုရောက်သွားရော.. ဂူအ၀ရောက်တော့မောနေရော..ဒါပေမဲ့အေးမြတဲ့
ညှိုတွေတက်လို့နေပါပြီ. .ရေပူတာကတော့အရင်အတိုင်းပူနေတုန်းပါပဲ။ ချိုးတဲ့သူတွေကချိုး..စိမ်တဲ့သူတွေကစိမ်..တချို့ ဆိုခြေထောက်ပဲရေပူစမ်းထဲချထားတယ်..တစ်ကိုယ်လုံးမချိုးပါဘူး။ စိမ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့အပျက်မခံပါ..အဖွဲ့ ထဲမှာ
ယောကျာ်းလေးတွေရဲ့ ရေပူစမ်းကတော့… ရှယ်ပဲ…အကုန်သူကြည့်လို့၇တယ်. .ဘာမှမကာထားပါဘူး..ကျွမ်းထိုးသူထိုး..ဒိုင်
PS: အဲ့လိုခရီးတွေကိုလိုက်ပါခံစားချင်ရင်တော့ …Just Follow me!! ….မွန်လေးနဲ့ လိုက်ခဲ့လို့ရပါတယ်….. Free & Easy tour ပဲစီစဉ်ပြီးစရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ ကမ္ဘာပတ်ကြမယ်….. 09421045685
Thint Aye Yeik says: ယုံပါပြီ
သား ယုံပါပြီ အန်တီ
သျှားသက်မာန် says: အန်တီအရွယ်မဟုတ်သေးလို့ အန်တီလို့လာမခေါ်ပါနဲ့ ..ညီမလေးလို့ ခေါ်ပါ
Ma Ei says: ကျုံထော်ရေတခွန်တော့ မရောက်ဖူးသေးဘူး
တရက်ခရီးတွေလဲ မသွားဖူးသေးဘူး ပင်ပန်းမယ်ထင်တယ်
ကရင်ပြည်နယ် တကယ်လှပါတယ် ရောက်ဖူးလဲ ခဏခဏရောက်ချင်တာပါဘဲ
သျှားသက်မာန် says: သွားကြည့်ပါမအိ…ပင်ပန်းတယ်ဆိုပေမယ့်…အရမ်းကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး…ရုံးသမားတွေအတွက်တော့..တော်တော်ကောင်းပါတယ်..